newdnn.com | An Online News Portal –
डोल्पामा भीषण आगलागी, सात घर जलेर नष्ट !
डोल्पा, २६ पुस । डोल्पाको मुड्केचुला गाँउपालिका–९ को होर्त गाउँमा साँझ भीषण आगलागी हुँदा सात घर जलेर पूर्णरुपमा नष्ट भएका छन् । आगलागीबाट सातघर पूर्णरुपमा जलेर नष्ट भएको र आगलागी अझै जारी रहेकाले नियन्त्रणका लागि प्रहरीको टोली पुगसिकेको जिप्रका डोल्पाका प्रहरी नायब निरीक्षक यमबहादुर मल्लले जानकारी दिए । प्रहरी र विभिन्न गाँउबाट आएका सर्वसाधारणले संयुक्तरुपमा आगलागी नियन्त्रणको प्रयास भइरहे पनि…
किन नियन्त्रणमा आउन सकेन जाजरकोटमा भाइरल ?
जाजरकोट, २६ पुस । झन्डै तीन साता अघिदेखि जाजरकोटमा फैलिएको भाइरल ज्वरोको प्रकोप नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । भाइरल प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरे पनि गाउँबाट बिरामी शिविरमा आउन नसक्दा उपचार कार्य प्रभावकारी हुन नसकेको हो । बिरामी गाउँमा छ्याप्छ्याप्ती भए पनि शिविर ल्याउनका लागि मानिस नहुँदा उपचार प्रभावकारी हुन सकेको छैन । एकै घरमा चारभन्दा बढी बिरामी हुनुका साथै…
डा. केसीलाई बयानका लागि अदालतमा उपस्थित गराइँदै
काठमाडौँ, २५ पुस । अदालतको अपहेलना अभियोगमा सर्वोच्चको आदेश अनुसार पक्राउ परेका डा. गोविन्द केसीलाई आज बयानमा लागि इजलासमा पेश गरिँदैछ। सोमबार साझ न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासको आदेश अनुसार केसीलाई गएराति अनशन स्थलबाटै पक्राउ गरिएको थियो।अदालतले मंगलबार बिहान ९ बजे बयानका लागि उपस्थित गराउन आदेश गरे पनि प्रहरीले सोमबार राति नै केसीलाई पक्राउ गरेको थियो। चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि…
ताप आकाशमा बहने र हावा चल्ने हुँदा न्यूनतम तापक्रम बढ्ने
काठमाडौं, २५ पुस । काठमाडौंसहित देशभरि नै अब ताक्रम बढ्दै जाने मौसमविदले अनुमान गरेका छन् । अबको केही दिन देशभरि कै मौसम सफा रहने भएकाले जमिनको ताप आकाशमा बहने र हावा चल्ने हुँदा न्यूनतम तापक्रम बढ्ने देखिएको मौसमविदले बताए । उनका अनुसार अहिले तराईमा लागेको बाक्लो कुहिरो दिउँसोपछि बिस्तारै हट्नेछ । अरु ठाउँको मौसम सामान्यतया सफा नै छ । मंगलबार…
फितलो व्याटिङका कारण भारतले पहिलो टेस्ट दक्षिण अफ्रिकालाई सुम्पियो !
एजेन्सी, २५ पुस । टेस्ट क्रिकेटमा झिनो लक्ष्य पाएपनि फितलो व्याटिङ सुधार्न नसकेपछि भारत दक्षिण अफ्रिकासँगको पहिलो टेस्ट क्रिकेटमा पराजित भएको छ । २ सय ८ रनको सामान्य लक्ष्य पछ्याएको भारत दोश्रो इनिङमा १ सय ३५ रनमै समेटिएपछि दक्षिण अफ्रिका ७२ रनले विजयी भएको हो । भारतलाई सस्तैमा समेट्न दक्षिण अफ्रिकाका भेरनन फिलिन्दर एक्लैले ६ विकेट लिए । आश्विन बाहेक…
सम्पादक टिम, २५ पुस । गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षाका अभियान्ता तथा भ्रष्टाचार, अनियमितता र अराजक प्रवृत्तिविरुद्ध निरन्तर खबरदारी गर्ने डा. गोविन्द केसी पक्राउ परेका छन् । अदालतको अवहेलना गरेको आरोपमा सर्वोच्च अदालतकै फैसलाका आधारमा डा.केसी सोमबार आमरण अनसनस्थल त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट पक्राउ परेका हुन् । यसअघि सामान्य लाग्ने तर गम्भिर एजेन्डा लिएर आमरण अनसन बस्ने केसी सोमबार भने सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिस…
कपिलवस्तुमा दश प्रतिशतले तोरी उत्पादनमा वृद्धि, बीउ र मलको अभाव !
कपिलबस्तु,२४ पुस। कपिलवस्तु जिल्लामा यस वर्ष तोरी उत्पादनमा वृद्धि हुने अुनमान गरिएको छ । गत बर्षको तुलनामा यस वर्ष तोरी उत्पादन दश प्रतिशतले बृद्धि हुन सक्ने जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले अनुमान गरेको हो । विगतका वर्ष तोरी खेतीको सिजनमा बीउ र मलको अभाव हुने गरे पनि यसवर्ष समयमै बीउ, मल र सिंचाईको सुविधा भएकाले उत्पादन बढ्ने सम्भावना रहेको जिल्ला कृषि…
सर्वोच्चको आदेशपछि डा. गोविन्द केसी अनसनस्थलबाटै पक्राउ !
काठमाडौं,२४ पुस । प्रहरीले आमरण अनसनमा रहेका डा.गोविन्द केसीलाई पक्राउ गरेको छ । अदालतको मानहानी मुद्दामा सर्वोच्चले डा। केसीलाई पक्राउ गरी भोलि मंगलबार विहान ९ बजे उपस्थित गराउन आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेश आएको तीन घन्टापछि प्रहरीले केसीलाई अनसन स्थलबाटै उठाएको हो । केसीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको डा. जीवन क्षत्रीले जानकारी दिए ।
पैदल यात्री लाई समुहमा बाटो काट्ने नयाँ अभियान सुरुवात
काठमाडौ,२४ पुस । जेब्रा क्रसिङमा बाटो काट्ने क्रममा दुर्घटना बढेको भन्दै महानगरिय ट्राफिक प्रहरिले पैदल यात्री लाई समुहमा बाटो काट्ने नयाँ अभियान सुरुवात गरेको छ । जेब्रा क्रसिङमा बाटो काट्नका लागि ट्राफिक बत्तिको अनिवार्य व्यवस्था हुनु पर्ने उपत्यकामा कुनै पनि स्थानमा नभएको हुदा ट्राफिक प्रहरिले हाललाई समुहमा बाटो काट्ने अभियान लागु गर्न लागेको हो । सोमबार देखि ललितपुरमा अभियान कार्यान्वयनको…
सबैको साझा एजेण्डा आर्थिक समृद्धि नै हो : अध्यक्ष दाहाल
काठमाडौँ,२४ पुस । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आर्थिक समृद्धिको खाका कोर्न सरकार, उद्योगी–व्यवसायी र विज्ञ सम्मिलित संयुक्त कार्यदल गठन गरेर जाने स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने, “सबै राजनीतिक दलको साझा एजेण्डा आर्थिक समृद्धिको बनेको छ । आर्थिक समृद्धिको आधारसहित वामगठबन्धनले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको छ । अब हामी सबैको साझा एजेण्डा आर्थिक समृद्धि…
सुदूरपश्चिम खप्तड गोल्डकप थ्री स्टार क्वाटरफाइनलमा प्रवेश
धनगढी,२४ पुस । ए डिभिजन क्लब थ्री स्टारले १४ महिनापछि फुटबलमा शानदार पुनरागमन गरेको छ। १४ महिनापछि फुटबल खेलमा फर्केको थ्री स्टारले सुदूरपश्चिम खप्तड गोल्डकपको पहिलो खेलमै झापा–११ लाई ३–१ ले पराजित गर्‍यो। गत वर्ष सेप्टेम्वरमा भारतमा बोर्डोलोइ ट्रपी खेलेयता थ्री स्टारको यो पहिलो प्रतियोगिता हो। जितपछि थ्री स्टार धनगढीमा जारी प्रतियोगिताको क्वाटरफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। धनगढी रंगशालामा भएको खेलको…
कलसेन्टरमार्फत करिब १० हजार मतदाताको गुनासो सम्बोधन
काठमाडौ,२४ पुस । निर्वाचन आयोगले कलसेन्टरमार्फत करिब १० हजार मतदाताको मतदानसम्बन्धी गुनासो सम्बोधन गरेको छ । आयोगले स्थानीय तह र प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनमा मतदाताका १० हजार ४ सय ६९ गुनासोलाई कलसेन्टरमार्फत सम्बोधन गरेको आयोगका कम्प्युटर अधिकृत श्रीराम क्षेत्रीले बताए । मतदाता शिक्षासम्बन्धी दुई हजार ५१२, आचारसंहितासम्बन्धी २६९, निर्वाचन मतदान प्रक्रियाबारे २२२, आयोगको वेभसाइटबारे ८९ र सुरक्षाका बारेमा सात…
पृथ्वी जयन्तीमा यही पुस २७ गते सार्वजनिक बिदाको घोषणा
काठमाडौं,२४ पुस । सरकारले राष्ट्रिय एकता दिवसका अवसरमा यही पुस २७ गते सार्वजनिक बिदा दिने भएको छ।गृह मन्त्रालयले आफ्नो बेवसाइटमार्फत एकता दिवसमा बिदा हुने जनाएको हो। उक्त दिन राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिन पर्छ। विसं २०६३ देखि अघिल्लो सालसम्म यो बिदा कटौती गरिएको थियो।
तराईका २२ जिल्लामा २ करोड २२ लाख को राहत वितरण
काठमाडौ,२४ पुस । चिसोको मारमा परेका तराईका २२ जिल्लाका नागरिकका लागि सरकारले २ करोड २२ लाख रुपैयाँ बराबरको राहत वितरण गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा गृह मन्त्रालयले हरेक जिल्लामा १० लाख रुपैयाको कम्मल, दाउरा लगायतका न्यायनो सामाग्री वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । गृहले सोमबार सरकारको मौज्दातमा रहेका कम्मललगायतका समाग्रीहरु पनि तत्काल तराईका २२ जिल्लामा पठाउने तयारी…
सर्वोच्च अदालतद्वारा डा.गोविन्द केसीलाई पक्राउ आदेश जारी
काठमाडौं,२४ पुस । प्रधानन्याधीश गोपाल पराजुलीको राजीनामा माग गर्दै अनशनमा बसेका त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्रध्यापक डा. गोविन्द केसीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले पक्राउ आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले डा. केसीलाई अदालतको मानहानी गरेको जनाउँदै पक्राउ आदेश जारी गरेको हो । प्रध्यापक डा. केसीले प्रधानन्याधीश पराजुलीको राजीनामाको प्रमुख माग राखेर सोमबार अपरान्ह ४ बजेदेखि चौधौ अनसन …